Kulanka u dhaxeeya QM iyo Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashooyinka oo weli socda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho (Mareeg)—Kulankan oo ah mid albaabada u xiran ayaa waxuu u dhaxeeyaa Wakiilka Gaarka ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Arimaha Dalka Soomaaliya Michael Keating iyo Xubno ka tirsan Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashooyinka.
Wada hadalkan Danjiraha Qaramada Midoobay iyo Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashooyinka uga socda Magaalada Muqdisho ayaa waxaa looga hadlayaa go’aankii dhawaan ka soo baxay Guddigan oo lagu laalay kuraasta 11 Xildhibaan.
Bayaanka Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashooyinka ayaa lagu xusay in Xildhibaanadan ay ku soo baxeen musuq maasuq iyo wax is-dabarin baahsan, taasina ay keentay in Guddiga uu ka soo horjeesto.
Ujeedka Kulanka labada dhinac ayaa lagu tilmaamay sidii xal looga gaari la haa arinta ku aadan go’aanka Guddiga, iyadoona xusid mudan in uu socdo soo celinta kuraasta 3 Xildhibaan oo lagu kala magacaabo Cabdiraxmaan Dheere, Mustaf Dhuxuloow iyo Mahad Maxamed Salaad.
Go’aanka Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashooyinka ayaa waxaa durbo siyaabo kala duwan uga hadlay musharaxinta qaarkood ee u taagan qabashada Xilka Madaxtinimo ee Dalka Soomaaliya.
Musharaxiintan ayaa ku eedeeyay Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashooyinka ay yihiin kuwa qeyb ka ah howlwadeenaha ololaha Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Sikastaba, Warar hordhac ah oo ay heleyso Mareeg media ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Danjiraha Qaramada Midoobay uu dadaal xoogan ugu jiro sidii uu u xalin ahaa qeylo dhaanta xoogan ee ka timid go’aanka Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashooyinka.